Ihe na 11 / 18 / 2019 by 阿斯劳 dere na gallery.
Mgbe ejiri ya dị ka mgbakwunye, Pyridoxal Hydrochloride nwere ike ịgwọ ma ọ bụ gbochie ọtụtụ nsogbu ahụike. A na-ejikarị ya site na ogwu ogbugba, ọnụ ma ọ bụ na mgbakwunye nri.
Isi mmalite nke pyridoxine hydrochloride vitamin B6 na nri gụnyere ọka, ọkụkọ / toki, inine na mkpụrụ osisi.
2. Kedu ihe kpatara bodybuilders ji chọọ vitamin - pyridoxine Hydrochloride?
Dịka onye na - arụ ụlọ, ị ga - achọ nri karịa ndị na - ebi ndụ ịnọ otu ebe. B-6 pyridoxine hydrochloride dị ezigbo mkpa maka gị n'ihi na ọ bụ ihe achọrọ na muscle phosphorylase, ọrụ nke ejikọtara na glycogen metabolism. Na nkenke, ịchọrọ vitamin B6 maka metabolism nke ahụike. Vitamin B6 na - akwalite ọrụ nke enzymes nke na - esonye na mmebi nke protein.
Mmetụta Pyridoxine hydrochloride na ahụ nwere ihe ọzọ iji rụọ ọrụ ya na protein metabolism. Ọ bụ ya mere na mgbe ị na-eji ya, ọ ga-adị mma ka ị rie nri ụtụtụ protein tupu ịmalite mgbatị ahụ. I nwekwara ike iri protein bara ọgaranya n’oge ị na-emega ahụ, mgbe ị na-azụ ọzụzụ, mgbe ịmachara ọzụzụ na tupu ị lakpuo ụra.
Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ị ga-eleghara nri ndị ọzọ anya. Ahụ gị chọrọ ọtụtụ mineral ndị ọzọ dị mkpa iji rụọ ọrụ nke ọma ma chebe gị pụọ na ọrịa.
Ga-achọkwa nnukwu ume mgbe ị na-arụ ọrụ. Pyridoxine hydrochloride na-erite uru na ahụ gị site na ịba ụba ọnụego nke ọkụ carbohydrates na sel gị. Nke a na-eme ka ị nweta ume zuru ezu.
Na 1939, Folkers na Harris kpebiri nhazi nke pyridoxine. Afọ isii ka nke ahụ gasịrị, Snell gosipụtara na B6 nwere ụdị abụọ: pyridoxamine na pyridoxal. Aha Pyridoxal Hydrochloride bịara n'ihi na vitamin B6 na-arụ ọrụ nke ọma na pyridine.
N'etiti B-vitamin, Pyridoxal Hydrochloride bụ nke kachasị mkpa maka ahụike anụ ahụ na nke uche nke bodybuilders. Ọ na - enyere aka na uto nke sel ọhụrụ, na - akọwa Pyridoxine hydrochloride na-ewuli elu ike. B6 na-enyekwa aka n'ịhazi edozi potassium na sodium, yana n'ịmepụta nucleic, DNA na RNA nke ọ bụkwa akụkụ nke ya.
Erughi Pyridoxal Hydrochloride na-eduga na ụjọ, mgbakasị, ehighị ụra nke ọma, adịghị ike, ire ọkụ, ntu ndị nwere akara, ogbu na nkwonkwo, na osteoporosis.
Agbanyeghị, dị ka otu nnyocha si kwuo, usoro Pyridoxal Hydrochloride dị ugbu a nke ndị gọọmentị US na-atụ aro maka ndị na-arụsi ọrụ ike ezughi oke.
Nke a pụtara na ndị na - ejedebe otu oriri ma ọ bụ na - egbochi calorie nwere ike bụrụ ihe na - erughị eru. Ya mere, ha nwere ike ọ gaghị erite uru na pyridoxine hydrochloride ma ọ bụrụ na ha na-a theụ ọgwụ ahụ dịka gọọmentị kwadoro.
Dabere na nsonaazụ nke nyocha a, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịgakwuru ọkachamara ahụike gị iji nyere aka chọpụta usoro kachasị mma / zuru oke nke pyridoxine hydrochloride nke na-edozi ahụ maka gị.
B-6 pyridoxine hydrochloride na-ekere òkè dị mkpa n'ịchịkwa ọnọdụ uche. Nke a bụ n'ihi na ọ na - emeputa ụbụrụ na - achịkwa mmetụta. Pyridoxine hydrochloride maka afọ ime dị ezigbo mkpa maka ụmụ nwanyị ndị nwere mmetụta uche ma ọ bụ nwee mgbanwe mgbanwe ọnọdụ nke nsogbu hormonal na-akpata n'oge ime ime.
Otu nnyocha metụtara 156 ndị toro eto nwere mmetụ mmetụ dị nro na oke ọbara homocysteine ​​chọpụtara na usoro pyridoxine hydrochloride dị elu na-ebelata ogo homocysteine ​​n'ọbara ma na-ebelata mbibi nke ụfọdụ akụkụ ụbụrụ nke nọ n'ihe ize ndụ nke Alzheimer.
Otu uru pyridoxine hydrochloride bụ na enwere ike iji ya gwọọ ihe mgbaàmà nke PMS gụnyere mgbakasị, ịda mba, na nchekasị. Ndị na-eme nchọpụta kwenyere na vitamin B6 nwere ike ịgwọ mgbaàmà ndị a n'ihi na ọ na-emepụta neurotransmitters nke na-enyere aka na nhazi ọnọdụ.
Ruo ọtụtụ iri afọ, a na-eji vitamin B6 mee ihe maka ọgwụgwọ ọgbụgbọ na ọgbụgbọ n'ime ụmụ nwanyị dị ime. Ọ bụkwa ihe mgwa Diclegis, ọgwụ eji agwọ ọrịa ụtụtụ. Nke a bụ otu uru pyridoxine hydrochloride dị elu maka ụmụ nwanyị na-arịa ọrịa a n'oge afọ ime ha.
Nri pyridoxine hydrochloride ziri ezi na ime di iche site na mmadu rue mmadu. Otu nnyocha metụtara ụmụ nwanyị 342 dị ime chọpụtara na ọgwụ ọgwụ nke 30mg kwa ụbọchị belata mmetụta nke ọgbụgbọ ha nanị ụbọchị ise ka ha malitere ọgwụgwọ ahụ.
Pyridoxine hydrochloride na-arụ nnukwu ọrụ na igbochi njigide akwara wee belata ihe egwu nke ọrịa obi. Ọ bụrụ na ị nwere obere vitamin B6, ihe egwu gị nke ịrịa ọrịa obi ga-afọ nke nta karịa nke ndị nwere ogo vitamin dị n'ọbara. Vitamin B6 na-ebelata ohere nke akwara akwara site na ibelata ogo nke homocysteine ​​n’ọbara.
Nke a bụ ikekwe kachasị mkpa nke eji pyridoxine hydrochloride enyere oria cancer taa. Ọ bụrụ na ị na-ezuru Pyridoxine hydrochloride, ohere gị ibute ụdị ọrịa kansa ga-ebelata. Ihe kpatara nke a edoghị anya mana ndị ọrụ nyocha kwenyere na ọ nwere ike na ikike nke B6 iji lụso mbufụt na-akpata ọnọdụ adịghị ala ala dịka ọrịa kansa.
N'ime nnyocha ụfọdụ emere iji chọpụta mmekọrịta dị n'etiti ọkwa pyridoxine hydrochloride na ọrịa ara ure, achọpụtara na ọkwa B6 zuru oke n'ọbara na-ebelata ohere nke ọrịa ara ure, ọkachasị n'ime ụmụ nwanyị postmenopausal.
Vitamin B6 na-enyere aka igbochi ọrịa anya, ọkachasị ndị metụtara afọ ịka nká (AMD). Mgbe ị nwere oke nke homocysteine ​​na-asọ n'ime ọbara gị, ị ga-enwe nnukwu ihe egwu nke ịmalite AMD. Pyridoxine hydrochloride na-enyere aka n'ibelata ogo nke homocysteine ​​n'ọbara wee belata ihe egwu nke AMD.
Nnyocha ọzọ jikọtara nsogbu anya na ọkwa dị ala n’ọbara; karịsịa nsogbu anya nke na-eduga na mkpọchi nke veins jikọtara na retina. Ejikọtakwara ọkwa dị ala nke pyridoxine hydrochloride na nsogbu nke retina.
Pyridoxine hydrochloride dị mma maka bodybuilders. Ọ dịkwa mma iji ọgwụ. Otú ọ dị, ọ nwere mmetụta dịgasị iche iche na ndị dị iche iche Somefọdụ n'ime mmetụta mmetụta pyridoxine hydrochloride gụnyere:
Ọ bụrụ na ịnweta mmetụta dị egwu pyridoxine hydrochloride siri ike mgbe ahụ ọ ga-aka mma ka ị chọọ nlekọta ahụike.
Nnukwu doses nke Pyridoxal Hydrochloride nwere ike ibute ọrịa nhụjuanya. Nsogbu ndị a, n’aka nke ha, na-ebute nsogbu kwụsie ike na enweghị mmetụta na ụkwụ. E nwekwara ụfọdụ akụkọ na nnukwu doses pyridoxine hydrochloride nwere ike ibute mmeghachi omume anụ ahụ. Luckly, mgbe ị kwụsịrị nnukwu ọgwụ, ị ga-agbake zuru oke.
Mgbe ị nọ na ọgwụ Pyridoxal Hydrochloride, ikwesighi ịkwụsị, bido iji ya na ọgwụ ọzọ, ma ọ bụ gbanwee usoro onyonyo na-enweghị nkwado nke ndị na-eweta ahụike gị.
Ọ bụ ezie na Pyridoxal Hydrochloride enweghị mmekọrịta mmekọrịta siri ike ma ọ bụ nke siri ike na ọgwụ ndị ọzọ, ọ dị mma ịkpachara anya mgbe niile.
Dị nnọọ ka Luminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) na-agbaji mmiri ọgwụ a iji kpochapụ ya n’ahụ gị. Iwere nchikota Dilantin na Pyridoxal Hydrochloride ga - eme ka ihe nke mbu ghara n’aru gi. Nke a nwere ike ime ka i nwekwuo ohere ijide onwe gị.
Pyridoxal Hydrochloride nwere mmekọrịta dị nro na ihe karịrị ọgwụ 70 dị iche iche. Yabụ, tupu i jiri ọgwụ ọ bụla yana ya, gbaa mbọ hụ na ị kpọtụrụ onye na-eweta ahụike gị.
Uru Pyridoxal Hydrochloride na bodybuilders dị ọtụtụ. Ọbụghị naanị bodybuilders, ndị egwuregwu ọ bụla dị mkpa kwesịrị inwe vitamin a na ngwaahịa. Agbanyeghị, ikwesiri iji ya na-agbasochi ọgwụ ndị dọkịta na-atụ aro anya.
MK-677 (Ibutamoren) ọ na-arụ ọrụ nke ọma Maka Ọkpụkpụ akwara? Nyocha Sarm [NEW]
Kedu ka Flibanserin si enyere nwanyị aka dị ka Mmekọahụ Mmekọahụ Synephrine HCL Powder - Abụba burner na ibu ọnwụ Mmeju